Baarlamaanka oo baaraya dhacdooyinka ay gabdho badan umuleen iyagoo imtixaanada sameynaya – The Voice of Northeastern Kenya
Baarlamaanka oo baaraya dhacdooyinka ay gabdho badan umuleen iyagoo imtixaanada sameynaya
Baarlamaanka dalka ayaa guddiga u qaabilsan arrimaha tacliinta ku amray inuu guda galo baaritaano la xariira sababaha keenay in gabdho badan oo arday ah ay uur qadeen kadibna umuleen xili guud ahaan dalka ay ka socdaan imtixaanada qaran ee fasalka afaraad ee dugsiyada sare loona yaqaano KCSE-da.
Ugu yaraan sagaal gabdhood ayaa umulay ka hora ma intii lagu guda jiray imtixaanadii fasalka sideedaad ee KCPE-da.
Sido kale waxaa la soo tabiyay inay gabdhaha qaar oo ay da’dooda u dhexeyso 13 ilaa iyo 18 ka jawaabayeen su’aalaha maadooyinka kala duwan iyagoo xaamila ah.
Wakiilka haweenka ee ismaamulka Homa Bay ,Gladys Wanga ayaa sheegtay in guddiga arrimaha tacliinta ee baarlamaanka looga fadhiyo inuu sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaano u sameeyo kadibna soo saaro qodobo lagu tallaaba qaadi karo.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii wasiiradda wasaaradda waxbarashada ee dalka Amina Maxamad ayaa walaac ka muujiysay tirade gabdhaha ee umulay oo ay ku tilmaantay mid sareysa.
Waxay ballanqaaday in dowlada ay soo bandhigi doonto nidaam dhibaatadan lagu tacaalayo.
Dhanka kale warbixin dhawaan la soo saaray ayaa lagu sheegay in gabdhaha uurka qaada ee ismaamulka Nairobi ay yihiin boqolkiba 17, Garissa iyo Mandhera boqolkiba 10 halka Wajeer dhacdooyinkaasi lagu sheegay boqolkiba 17.
← Madaxweynaha dalka oo mar kale sheegay in ciidamada KDF-ta aynan ka soo baxeynin Soomaaliya
Maamulka maareeya abaaraha oo aan faahfaahin sida loo isticmaalay 4 bilyan oo shilin →